Xannibaadda - Mustaqbalka Teknolojiyadda Maaliyadeed | Martech Zone
Blockchain - Mustaqbalka Teknolojiyada Maaliyadeed
Erayada cryptocurrency iyo xannibaadda ayaa hadda laga helay meel kasta. Dareenka noocan oo kale ah ee dadweynaha waxaa lagu sharxi karaa laba arrimood: qiimaha sare ee Bitcoin cryptocurrency iyo kakanaanta fahamka nuxurka tikniyoolajiyadda. Taariikhda soo ifbaxa lacagtii ugu horeysay ee dhijitaalka ah iyo tikniyoolajiyadda aasaasiga ah ee P2P ayaa naga caawin doonta inaan fahamno kuwan "kaymaha kripto".
Shabakad aan baahin
Waxaa jira laba qeexitaan oo ah Blockchain:
• silsilado isdaba joog ah oo baloogyo ay ku jiraan macluumaad.
• Kaydiyay xog ururin;
Labaduba run ayey kujiraan nuxurkooda laakiin jawaab uma siinayaan su'aasha ah waxa ay tahay. Fahmitaanka wanaagsan ee tikniyoolajiyadda, waxaa lagama maarmaan ah in la xusuusto naqshadaha shabakadda kombiyuutarka ee jira iyo midkee ku sii xoogaysanaya suuqa nidaamyada IT-da casriga ah.
Guud ahaan waxaa jira laba nooc oo naqshadaha dhismaha ah:
Shabakada isku faca ah.
Xiriirinta habka ugu horreeya waxay muujineysaa xakameynta wax walba: codsiyada, xogta, marin u helka. Dhammaan caqli galnimada nidaamka iyo macluumaadka ayaa ku qarsoon gudaha serverka, taas oo yareyneysa shuruudaha waxqabadka ee qalabka macmiilka waxayna hubineysaa xawaaraha waxqabadka sare. Habkani wuxuu helay dareenka ugu badan ee maalmaheenna.
Shabakadaha isku faca-faca ah ama baahinta baahsan ma lahan aalad cillad leh, ka-qaybgalayaasha oo dhami waxay leeyihiin xuquuq siman. Qaabkan, adeegsade kastaa ma aha oo keliya macaamil laakiin wuxuu kaloo noqdaa adeeg bixiye.
Nooca hore ee shabakadaha isku faca ah ayaa ah nidaamka fariinta ee loo qaybiyey USENET oo la soo saaray 1979. Labaatankii sano ee soo socota waxaa lagu calaamadeeyay abuurista P2P (Peer-to-Peer) - codsiyada ku saabsan gebi ahaanba qaybaha kala duwan. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan waa adeegga 'Napster service', shabakadda wadaag faylka isku faca ah ee isku faca ah, ama BOINC, barmaamijka softiweerka ee xisaabinta la qaybiyo, iyo nidaamka BitTorrent, oo aasaas u ah macaamiisha casriga ah ee durdurka leh
Nidaamyada ku saleysan shabakadaha baahsan ayaa sii jiraya, laakiin waxay si muuqata u luminayaan macmiilka-serverka baahsanaanta iyo u hoggaansanaanta baahida macaamiisha.
Inta badan codsiyada iyo nidaamyada hawlgalka caadiga ah waxay u baahan yihiin karti ay ku hawlgalaan xog uruurin. Waxaa jira siyaabo badan oo loo abaabulo shaqada noocaas ah midkoodna wuxuu adeegsadaa habka fac-ilaa-fac. Qeybinta, ama isbarbar dhiga, keydka macluumaadka waxaa lagu kala soocay xaqiiqda ah in macluumaadka qeyb ama buuxda lagu kaydiyo aalad kasta oo shabakada ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka nidaamka noocan ah waa helitaanka xogta: ma jiro hal dhibic oo guuldarro ah, sida ay tahay kiiska keydka macluumaadka oo ku yaal hal server. Xalkani wuxuu sidoo kale leeyahay xadidaadyo gaar ah oo ku saabsan xawaaraha cusbooneysiinta xogta iyo u qeybinta xubnaha shabakadaha. Nidaamka noocan ah uma adkeysan doono culeyska malaayiin isticmaale oo si joogto ah u daabacaya macluumaad cusub.
Tikniyoolajiyadda xannibaadda ayaa adeegsanaysa xog ururin loo qaybiyey baloogyo, kuwaas oo ah liis isku xidhan (baloog kasta oo soo socda ayaa leh aqoonsiga kii hore). Xubin kasta oo shabakadda ka mid ah wuxuu hayaa nuqul dhammaan hawlgallada la qabtay wakhti kasta. Tani suurta gal ma noqon laheyd hadaan la helin hal-abuurro gaar ah oo loogu talagalay in lagu hubiyo amniga iyo helitaanka shabakadda. Tani waxay na keeneysaa xannibaadda ugu dambeysa ee “tiir” - kriptografi. Waa inaad la xiriirtaa a shirkadda horumarinta barnaamijyada moobiilka si aad u kireysato horumariyeyaasha xannibaadda si ay ugu dhexgeliyaan tikniyoolajiyadan meheraddaada.
Ka dib markii la darsay qaybaha ugu muhiimsan iyo taariikhda abuurista tikniyoolajiyadda, waxaa la joogaa waqtigii ugu dambeyntii la baabi’in lahaa khuraafaadka la xiriira erayga "xannibaadda". Tixgeli tusaale fudud oo ku saabsan sarrifka lacagta dhijitaalka ah, mabda'a hawlgalka tiknoolajiyada xannibaadda ee aan lahayn kombuyuutarrada.
Ka soo qaad in aan hayno koox ka kooban 10 qof oo doonaya in ay awoodaan in ay qabtaan howlaha sarifka lacagaha ee ka baxsan nidaamka bangiyada. Si taxaddar leh u tixgeli ficilada ay sameeyeen kaqeybgalayaasha nidaamka, halkaasoo xannibaadda ay ku matali doonaan waraaqo joogto ah
Ka-qaybgale kasta wuxuu leeyahay sanduuq uu ku dari doono xaashiyo ay ku qoran yihiin macluumaad ku saabsan dhammaan macaamillada dhammaaday ee nidaamka.
Kaqeybgale kastaa wuxuu la fadhiisanayaa warqad iyo qalin wuxuuna diyaar u yahay inuu duubo dhamaan macaamillada la sameyn doono.
Waqtiga qaar, kaqeybgalaha lambarka 2 wuxuu doonayaa inuu u diro 100 doolar lambarka 9 ee kaqeybgalaha.
Si loo dhammeeyo macaamil ganacsi, Kaqeybgalaha Lambarka 2 wuxuu qof walba u sheegayaa: "Waxaan rabaa inaan ku wareejiyo 100 doolar Lambarka 9aad, haddaba qoraalkan ku qor xaashidaada."
Intaas ka dib, qof kastaa wuu hubiyaa inuu arko ka-qaybgalaha 2 inuu leeyahay dheelitir ku filan oo lagu dhammaystiro macaamilka. Hadday sidaas tahay, qof kastaa wuxuu qoraal ku samaynayaa macaamillada xaashiyahooda.
Taas ka dib, macaamil ganacsi ayaa loo arkaa inuu dhameystiran yahay.
Waqti ka dib, kaqeybgalayaasha kale waxay sidoo kale u baahan yihiin inay sameeyaan howlo isdhaafsi. Kaqeybgalayaashu waxay sii wadaan inay ku dhawaaqaan oo diiwaan geliyaan mid kasta oo ka mid ah macaamil ganacsi ee la qabtay. Tusaalaheena, 10 macaamil ganacsi ayaa lagu duubi karaa hal xaashi, ka dib markaa waa lagama maarmaan in la dhigo xaashida dhameystiran ee sanduuqa oo la qaato mid cusub.
Ku Darida Xaashida Sanduuqa
Xaqiiqda in xaashi lagu riday sanduuq waxay ka dhigan tahay in dhammaan kaqeybgalayaashu ay isku raacsan yihiin ansaxnimada dhammaan howlaha la qabtay iyo suurtagal la'aanta in la beddelo xaashida mustaqbalka. Tani waa tan hubineysa hufnaanta dhammaan macaamil ganacsi ee ka dhexeeya kaqeybgalayaasha aan is aaminin.
Marxaladda ugu dambeysa waa kiis guud oo lagu xallinayo dhibaatada jeneraalada Byzantine. Xaaladaha isdhexgalka ee kaqeybgalayaasha fog, oo qaarkood laga yaabo inay yihiin kuwa wax galaya, waxaa lagama maarmaan ah in la helo istiraatiijiyad guuleysata oo dhan. Nidaamka lagu xallinayo dhibaatadan waxaa laga daawan karaa iyada oo loo marayo qaababka tartanka.
Aagagga qalabka maaliyadeed, Bitcoin, oo ah tii ugu horreysay ee loo yaqaan 'cryptocurrency mass', ayaa dhab ahaan muujisay sida loogu ciyaaro xeerarka cusub iyada oo aan dhex dhexaadiyayaal iyo kontaroolin xagga sare. Si kastaba ha noqotee, laga yaabee xitaa natiijada ugu muhiimsan ee soo bixitaanka Bitcoin waxay ahayd abuuritaanka tiknoolajiyada xannibaadda. La xiriir shirkadaha horumarinta xannibaadda si ay u kireystaan ​​horumariyeyaasha xannibaadda si ay ugu dhexgeliyaan tikniyoolajiyadan meheraddaada.
Tags: blockchainhorumarka blockchaintechnology blockchainTeknolojiyadda Maaliyadda
Kenneth Evans waa Istiraatiijiyad Suuq-geynta Waxyaabaha loogu talagalay Shirkadaha Horumarineed ee ugu sareeya, madal cilmi baaris loogu talagalay shirkadaha horumarinta barnaamijka ee USA, UK, India, UAE, Australia iyo adduunka oo dhan. Wuxuu wax ku biirinayey barmaamijyo wax lagu qoro iyo Madasha.
Waa maxay Aaladda Robotic Automation?
Shan Siyaabood oo Lagu Kordhiyo Ciyaartaada Suuqgeynta Mawduuca